နှလုံးသား ဒိုင်ယာရီ: ကြိုးကြာသို့ အလွမ်း
Posted by မိုးနတ်ကြယ်စင် at 6:39 AM
လေပြေချို February 2, 2013 at 7:28 AM
ကြိုးကြာအလွမ်းကဗျာကို ခံစားသွားပါတယ်... လမ်းမှာတွေ့ရင်ပြောပေးမယ်နော်... ကြိုးကြာလေးရေ နေ့ရက်တွေလက်ချိုးရေလို့ စောင့်မျှော်နေတဲ့ မိုးနတ်ဆီအမြန်ပြန်ပါလို့ ဟီးဟီး
ကိုကိုမောင်(ပန်းရနံ့) February 2, 2013 at 7:50 AM
ရောဂါတွေ ပြန်ထလာပြီထင်တယ်။ ကဗျာလေးတွေက အသက်ဝင်နေတယ်။
ဒါ စိတ်ကူးယဉ်သက်သက်တော့ မဟုတ်တန်ရာ။ ကိုယ်တိုင်ခံစားဖူးမှ ရေးနိုင်တာကလား။
အတိတ်က ကြိုးကြာ၊ ပစ္စုပ္ပုန်အထိလိုက်လာပြီး အနာဂါတ်တိုင်အောင် ခေါ်ဆောင်သွားမယ်ထင်ပါရဲ့။
များများခံစား များများရေး ကဗျာလေးတွေ လန်းလာမယ်။း)
Sweety Snow February 2, 2013 at 8:12 AM
ဟုတ်တယ် ကဗျာလေးတွေက အသက်ဝင်တယ်.. အလွမ်းကဗျာလေးတွေ.. ကြိုးကြာလေးမှာလည်း သူ့ခံစားချက်နဲ့သူ ခံစားနေရမှာပါ.. တခါတလေ. ချန်ထားခဲ့တဲ့သူက ကျန်နေခဲ့တဲ့သူထက် ပိုခံစားရ့တယ်.. ။ မိုးနတ်ကဗျာရေးတာ တော်တော်လှတယ်.. နောက်လဲ များများရေးနော်။
လရိပ်အိမ် February 2, 2013 at 9:07 AM
ကြိုးကြာ ကြိုးကြာ ဘယ်သူများပါလိမ့်။
ရတုသစ် February 2, 2013 at 9:39 AM
မေမြို့မိုး February 2, 2013 at 12:07 PM
ကြိုးကြာဆိုတော့ ဟို အဆိုတော်ညီအစ်မ နှစ်ယောက်ပဲ သွားသွားမြင်နေတယ် :)
ညီလင်းနိူင် February 3, 2013 at 1:13 AM
ကဗျာချိုချိုလေးကို မျှဝေခံစားခဲ့ပါတယ် ညီမလေး။
roseayemaung February 3, 2013 at 2:50 AM
အသဲလေးတွေနဲ့ဆောက်ထားတဲ့အိမ် February 3, 2013 at 3:51 AM
မိုးနတ်ကြယ်စင် February 3, 2013 at 4:17 AM
စနိုးရေ....မိုးနတ်ကဗျာလေးတွေကို မှတ်မှတ်ရရ ဝေဖန်ပေးတာ အာဘွားးးးးးးးးးးးးးးး :P
မမလရိပ်ရေ....ကြိုးကြာဆိုတာ ကြိုးကြာငှက်လေးနဲ့ တူတဲ့ ကောင်မလေးကိုပြောတာပါ :)
ကိုရွှေရတုရေ....ရှင့်ကိုတော့ မမှီပါဘူးရှင်ရယ် :D
မမမ ကတော့ လုပ်ချလိုက်ပြန်ပြီ Honnnnnnnnnnnnnn :(((
အကိုညီလင်းရေ.....သတိတရ ရှိနေတယ်ဗျ :)
ဟုတ်...နှင်းဆီလေးရေ....မိုးနတ်ကို သူက နဲနဲလေးမှ မသနားဘူးရှင့် (အလကားပြောတာ)
သူမှ မရှိတာကို Ahakhakkkkkkkkkkkk
မိုးနတ်ကြယ်စင် February 3, 2013 at 4:19 AM
ခက်ပဲ ခက်ရချည့်....ဒီကိစ္စကို မိမိုးနတ် ဘယ်လိုဖြေရှင်းရပါ့ :(
မိုးနတ်ကဗျာထဲမှာ ထဲ့ရေးထားတဲ့ ကြိုးကြာ ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းဟာ
ချစ်သူကောင်လေးကို မပြောမဆိုထားခဲ့တဲ့ အဝေးကြီးကို ထွက်သွားတဲ့
ကောင်မလေးကို ကြိုးကြာမလေးနဲ့ တင်စားပြီးရေးဖွဲ့ထားတာပါ.....
ပြီးတော့ ဒီကဗျာမှာ မိုးနတ်က ကောင်လေးတစ်ယောက်အနေနဲ့
ခံစားပြီး ရေးဖွဲ့ထားတာပါ....ကြိုးကြာမလေး လို့ပဲ တင်စားလို့ရတယ်လေ
ကြိုးကြာကောင်လေး ဆိုပြီး ရေးလို့မှ မရတာ...နို့...ဒီကဗျာက
ယောကျာ်းလေးခံစားချက်မျိုးလေ....အရင်ကလဲ မိုးနတ် ယောက်ျားလေး
အနေနဲ့ ခံစားရေးဖွဲ့တဲ့ ကဗျာတွေ အများကြီးရှိတယ်လေ....:)))
မိုးနတ်ကြယ်စင် February 3, 2013 at 4:22 AM
အသဲလေး နဲ့ ဖူးလေး ရေ ....
i miss nay tal naw :)))
မိုးနတ်ကြယ်စင် February 3, 2013 at 4:36 AM
တဂျီးမင်းရေ ....မိမိုးနတ် ရောဂါပြန်ထတာ မဟုတ်ရပါဘူးရှင်....
စိတ်ကူးထဲမှာပဲ ခံစားရေးဖွဲ့ထားတာပါ....ဘာလဲ တကယ့်ခံစားချက်
မဟုတ်ရင် ကဗျာဖြစ်အောင် ရေးဖွဲ့လို့မရတော့ဘူးလားးးးးးးးးးး
အဲလောက်တောင် မိုးနတ်ကို အထင်သေးလား ?
တဂျီးမင်းတူမပါ .....အဲလောက်ကတော့ ဖြစ်ပါတယ် Ahakhak !
ထားပါ...တူများတွေကြားရင် ဒီကောင်မလေး အခြောက်တိုက်ဘ၀င်မြင့်
နေတယ်....ကြွားလွန်းတယ် ထင်နေအုံးမယ် :(((
တကယ်က ဒီကဗျာလေးက စိတ်ကူးထဲက ကဗျာသက်သက်..
ပြီးတော့ မိုးနတ် ကဗျာရေးသက်မှာ တထိုင်တည်းနဲ့ အပြီးရေးခဲ့တဲ့
ကဗျာရှည်တစ်ပုဒ် ( ဟုတ်တယ် ဒီကဗျာလေးက တနေ့ခင်းထဲနဲ့
အပြီးရေးထားတာ.... နောက်ပြီး ညရောက်တော့ စိတ်ပါတာနဲ့
အိမ်လေးပေါ်မှာ တခါတည်းဆွဲတင်ပစ်လိုက်တာ...အဲလို...အဲလို )
သိပြီလားရှင် :P အဲလေ ပြောချင်တာတောင် ဘယ်ရောက်သွားပါလိမ့်
နော် ငါ့နှယ် .....အဓိက ပြောချင်တာ တစ်ခုကျန်သေးတယ်...
နောက်ဆို မီးရှေ့မှာ သူ့အကြောင်းတွေကို ယောင်လို့မှတောင်
ထဲ့မပြောပါနဲ့....မီး သူ့ကို မေ့ထားလိုက်တာ ကြာပြီ .....
အဲလိုဆိုတော့ သူကသိပ်ဆိုးလို့ မထင်နဲ့နော် ....သူက မီးအပေါ်
သိပ်ကောင်းတာ...အာ့ကြောင့် သူ့အကြောင်းတွေကို လူကြီးက
ပြန်ပြီး အစဖော်ပေးရင် သူ့ကို အရမ်းသတိရနေတတ်လို့...
မမေ့နိုင်မှာစိုးလို့.....ကြားပြီနော် လူကြီးမင်းးးးးးးးး :P
သူကြီးမင်း February 3, 2013 at 7:52 AM
သူ့ကို မေ့ထားလိုက်ပြီလဲပြောသေး သူ့အကြောင်းတွေလဲ စဉ်းစားနေသေး။ ခက်ခက်ချေပြီကော မိမိုးနတ်ရယ်။ သူကြီးမင်းကဖြင့် အဲဒီတစ်ယောက်အကြောင်း ယောင်လို့တောင် ဟ မိခဲ့တာမှ မဟုတ်တဲ့ဟာကို။ သွသူ သတိရပြီး မမေ့နိုင်ဖြစ်နေတာကိုများ။ အော် မိုးနတ် မိုးနတ် ကြိုးပြတ်ချင်ယောင် ဆောင်နေလေရော့သလား မသိ။း))
ရိုးမြေကျ February 3, 2013 at 6:50 PM
ကြိုးကြာဘယ်တူလဲ။ သိချင်တယ်နော်။ ကြိုးကြာတော့မသိဘူး။ မမတော့ ကဗျာလေးဖတ်ပီး ကြွေသွားတယ်။
မျှော်နေသူရင်ခွင်ထဲ ကြိုးကြာလေး ပြန်ရောက်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးရင်း
ထရီဆာ (Teresa) February 3, 2013 at 11:43 PM
ကြိုးကြာလေးက ပြန်လာမယ်တဲ့ မိုးနတ်လေးရေ .. :P
ကဗျာလေးက ချစ်ဖို့ကောင်းလိုက်တာ .. အဲ့ ကြိုးကြာလေးကော ချစ်ဖို့ကောင်းလား ??? :P
မိုးနတ်ကြယ်စင် February 4, 2013 at 3:09 AM
Honnnnnnnnnnnnn ( Luu Gyi Min )
မမရိုးမြေကျရေ.....ကောင်လေးကို ဆုတောင်းပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါနော် :)
မမထရီဆာရေ.....သိဘူးရှင့်....ကောင်မလေးက ချစ်ဖို့တော့ တော်တော်ကောင်းမဲ့ပုံပဲ :)))
witch83 February 4, 2013 at 6:22 AM
ကြိုးကြာက.. တကယ်တော့ အမလေးကို...း)
ဘုန်း ၂ တောက် February 4, 2013 at 9:16 AM
မဆုံတဲ့ဖူး မေ့ပစ်လိုက်ပါတော့...အဲဟုတ်ဖူး ကြိုးကြာဆိုလို့ ကြိုးကြာဆိုတဲ့သီချင်းကို သွားသတိရလို့ပါ မိုးနတ်ရယ်။ ခိုဖြူခိုပြာများ အုပ်လိုက်ပျံသန်းကာ အိမ်ခေါင်ထိပ်ဖျားမှာ နားကြပြီ...မိုးတွင်းလေးတစ်ခု ပြက္ခဒိန်ပေါ် ဖြတ်သွား...ရေးနေရင်းနဲ့ ဘယ်ရောက်သွားပြန်ပါလိမ့်...ကြိုးကြာအမြန်ပြန်လာပါစေနော်....ဘိုင်....
ရင်ခုန်ရသူ(ကဗျာ၊အချစ်၊ဟာသ၊အလွမ်း) February 4, 2013 at 9:40 AM
ရင်ခုန်ရသူ(ကဗျာ၊အချစ်၊ဟာသ၊အလွမ်း) February 4, 2013 at 9:45 AM
နှင်းနုလွင် February 4, 2013 at 10:23 AM
ကိုယ့်အနားမှာ လာပြီးတော့ သီကျူးနေသလို
ကဗျာ. ဖတ်ရင်းနဲ့ လွမ်းသွားရတယ်
ညီလင်းသစ် February 4, 2013 at 2:34 PM
အလွမ်းတွေနဲ့ သိပ်သိပ်သည်းသည်း ရှိလှတဲ့ ကဗျာလေးကို သဘောတကျနဲ့ ဖတ်သွားပါတယ် ညီမမိုးနတ်ရေ...။း)
မင်းအရိပ် February 4, 2013 at 4:47 PM
မြဝတီဇော် February 4, 2013 at 8:56 PM
မိုးနတ်ရဲ့ ကြိုးကြာသို့ အလွမ်းကို ဖတ်ပြီး အစ်မတောင် လွမ်းသွားမိတယ်။ အရေးအသား ပြေပြစ်သလို ဖွဲ့ဆိုပုံ လည်း ကောင်းတဲ့ ကဗျာလေးတစ်ပုဒ်ပါ။ အားပေးလျက်ပါ ညီမလေးရေ...။ :)
kokoseinygn February 4, 2013 at 9:29 PM
မိုးနတ်ကြယ်စင် February 5, 2013 at 6:40 AM
ဟုတ် ...မမ witch83 :)
နက်ဖြန်မနက် အတွက်တော့ ဂွတ်မောနင်းရှင့် :)))
ပြောပြန်ပြီဟယ် ....နင်ပဲပြော နင်ပဲပြော နာတော့မပြောတော့ဘူးးးး
ပါးစပ်ညောင်းလို့ Ahakhak :P ( ရင်ခုန်ရသူ )
စာတွေလာဖတ်တာ တကယ်ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ် :)
မင်းရေ.....မတွေ့တာ သိပ်ကိုကြာပြီ ....i miss u :)
မမဇော်ရေ...ရှဲရှဲနီ ပါ :P
ကိုကိုစိန်ကြီးရေ....အမယ်မယ် ပန်းနုရောင် အလွမ်းတွေဆိုပါလား :D
ဆူးသစ် February 5, 2013 at 6:44 AM
မိုးနတ်ကြယ်စင် February 7, 2013 at 5:08 AM
ဟုတ်ကဲ့ပါ အကိုရေ....ညလေးက အကို့စာတွေကို သဘောကျနှစ်သက်မိလို့
ညလေးကဗျာနဲ့ ပတ်သက်ပြီးလို့ ပြောချင်တာကတော့ ကောင်လေးတစ်ယောက်အနေနဲ့
ခံစားပြီးရေးဖွဲ့ထားတာလို့ပဲ ပြောပါရစေရှင်.....ကဗျာလေးကို ညလေးနဲ့ထပ်တူ
ခံစားပေးသွားလို့ အတိုင်းမသိ ၀မ်းမြောက်မိရကြောင်းပါ....:)
နွေတေးရှင် (မင်းဧရာ) February 6, 2013 at 6:03 AM
ကဗျာကို ဖတ်ပြီး သဘောကျ နှစ်ချိုက်မိသလို သူကြီးမင်းကို ရန်ထောင်ထားတာလေးကိုလည်း သဘောကျမိရဲ့ လူပျိုးကြီးတွေများ တယ်ခက်တယ်း)))။
ဟုတ်တယ်ဗျ အစ်ကိုဆူးသစ် ပြောသွားသလိုဘဲ ကဗျာက ကောင်းလေးတစ်ယောက်က ကောင်မလေးကို လွမ်းသည့်ဟန် ပေါက်နေတယ် ( အရင်တခါလည်း အကိုပြောဘူးတယ် မှတ်တယ် ) အဲအခါကျတော့ ဖတ်ရတာ တစ်ခုခု လိုသွားသလိုဘဲ ကဗျာကောင်းပါရက်နဲ့ တစ်ခုခုလိုနေတဲ့ အလိုမျိုးပေါ့။
မိုးနတ်ကြယ်စင် February 7, 2013 at 5:11 AM
ရော.....ခက်ရချည့် အကိုတော် (မင်းဧရာ)
လွင်ပြင်လှိုင်းငယ် February 6, 2013 at 7:48 PM
အလွမ်းတွေအန်ကျလာတော့ ကဗျာကအသက်ဝင်လှပါပေတယ် ။
Candy February 6, 2013 at 7:49 PM
မိုးနတ်က တော်လိုက်တာ ကန်ဒီဆို ကဗျာကို ဖတ်ပဲဖတ်တတ်တယ် ဟိ :D
မိုးနတ်ကြယ်စင် February 7, 2013 at 5:13 AM
အကိုလွင်ပြင်လဲ ပျောက်ချက်သားက ကောင်းလှချည့်...
ကန်လေးလဲ ကဗျာရေးလေ....မိုးနတ်လဲ တလှည့်ပြန်ပြီး
ကန်ရေးတဲ့ ကဗျာလေးဖတ်ချင်တယ်ကွယ် :P
ရည်ဝေ February 8, 2013 at 6:20 PM
း) တိုက်ဆိုင်သည် တိုက်ဆိုင်၏ မိုက်စ်
ချစ်တတ်သူတိုင်း နားလည်တတ်ရင် July 28, 2013 at 6:52 AM
အတိုင်းမသိ ခံစားရလွန်းလို့စာဖတ်ရင်းဝေလာတဲ့မျက်ရေ ကြောင့်စာမဖတ်နိုင်တော့ဘူး
မိုးနတ် အားပေးတယ် ဒီလိုခံစားမှုတွေရှိလာအုံးမယ်ဆိုရင် ထပ်ဖတ်ချင်လှတယ်